ဘာစီလိုနာ၊ ရီးရဲလျမကျဒရဈ၊ မနျစီးတီး အားလုံးက လျောတရိုမာတီနကျဇျကို လိုခငျြပမေယျ့ တနျကွေးမပေးခငျြကွဘူးလို့ အေးဂငျြ့ဖွဈသူထုတျဖျောပွောဆို – Myan Ball
အငျတာမီလနျတိုကျစဈမှူးရဲ့ အေးဂငျြ့ဖွဈသူက လျောတရိုမာတီနကျဇျကို အသငျးတျောတျောမြားမြားက စိတျဝငျစားကွပမေယျ့ ပုံမှနျကမျးလှမျးမှု မလုပျခဲ့ကွဘူးလို့ ထုတျဖျောပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ အငျတာမီလနျတိုကျစဈမှူး လျောတရိုမာတီနကျဇျကို ပွီးခဲ့တဲ့အပွောငျးရှတေု့နျးက ဥရောပက ထိပျသီးအသငျးတျောတျောမြားမြား ဆကျသှယျခဲ့ကွပွီး ဘာစီလိုနာအသငျးက ရပေနျးအစားဆုံး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
သို့သျောလညျး ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ တိုကျစဈမှူးရဲ့ တနျကွေး ယူရို သနျး ၁၁၀ ကို မပေးခငျြတဲ့အတှကျ သဘောတူညီမှု မရခဲ့ပါဘူး။ အခွားသောအသငျးတှဖွေဈကွတဲ့ ရီးရဲလျမကျဒရဈ၊ မနျစီးတီး နဲ့ ပီအကျဈဂြီအသငျးတို့ကလညျး အာဂငျြတီးနားတိုကျစဈမှူးကို ဆကျသှယျမှုတှေ လုပျခဲ့ပါတယျ။
ကစားသမားရဲ့ အေးဂငျြ့ဖွဈတဲ့ Alberto Yaque က “ဘာစီလိုနာ၊ ရီးရဲလျမကျဒရဈ နဲ့ မနျစီးတီးအသငျးတို့လား? သူတို့အားလုံးက သူ့ကို (လျောတရို) လိုခငျြကွပမေယျ့ အကောငျအထညျမဖျောခငျြကွပါဘူး။ သူ့မှာ အသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျး (၂) နှဈကနျြပါသေးတယျ။ အပွောငျးအရှေ့ ဈေးကှကျကလညျး ပိတျသှားပါပွီ” လို့ အာဂငျြတီးနားက အားကစားသတငျးဌာနတဈခုကို ပွောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဘာစီလိုနာ၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်၊ မန်စီးတီး အားလုံးက လော်တရိုမာတီနက်ဇ်ကို လိုချင်ပေမယ့် တန်ကြေးမပေးချင်ကြဘူးလို့ အေးဂျင့်ဖြစ်သူထုတ်ဖော်ပြောဆို
အင်တာမီလန်တိုက်စစ်မှူးရဲ့ အေးဂျင့်ဖြစ်သူက လော်တရိုမာတီနက်ဇ်ကို အသင်းတော်တော်များများက စိတ်ဝင်စားကြပေမယ့် ပုံမှန်ကမ်းလှမ်းမှု မလုပ်ခဲ့ကြဘူးလို့ ထုတ်ဖော်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ အင်တာမီလန်တိုက်စစ်မှူး လော်တရိုမာတီနက်ဇ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့တုန်းက ဥရောပက ထိပ်သီးအသင်းတော်တော်များများ ဆက်သွယ်ခဲ့ကြပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းက ရေပန်းအစားဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်လည်း ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ တိုက်စစ်မှူးရဲ့ တန်ကြေး ယူရို သန်း ၁၁၀ ကို မပေးချင်တဲ့အတွက် သဘောတူညီမှု မရခဲ့ပါဘူး။ အခြားသောအသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်၊ မန်စီးတီး နဲ့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းတို့ကလည်း အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှူးကို ဆက်သွယ်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကစားသမားရဲ့ အေးဂျင့်ဖြစ်တဲ့ Alberto Yaque က “ဘာစီလိုနာ၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် နဲ့ မန်စီးတီးအသင်းတို့လား? သူတို့အားလုံးက သူ့ကို (လော်တရို) လိုချင်ကြပေမယ့် အကောင်အထည်မဖော်ချင်ကြပါဘူး။ သူ့မှာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း (၂) နှစ်ကျန်ပါသေးတယ်။ အပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက်ကလည်း ပိတ်သွားပါပြီ” လို့ အာဂျင်တီးနားက အားကစားသတင်းဌာနတစ်ခုကို ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။